heater infrared ngoba indlu likhipha infrared bunjengelanga. Lakhe okuthiwa ngenxa yokuthi iningi ukushisa ukuthi livela inkanyezi yethu, elise kulesi sifunda bohlu. Umgomo we operation ye-heater lefoni ulula, futhi aqukethe e nobunzima izindlela ezingokoqobo ukugcwaliseka idivayisi. It kuyafaneleka ukucabangela ukuthi yimaphi amadivayisi zalolu hlobo ezikhona namuhla, futhi endleleni ukukutshela ukuthi kusebenza kanjani.
Umgomo we operation ye-infrared heater isibani iseduze kanjani ilanga uqobo. Kulesi suborder eziningi, okufaka Halogen. Ingqikithi wabo ngendlela elandelayo: e medium igesi engaxubani namakhemikhali etholakalayo Nichrome Kuvunguza okuyinto nilimaza umnyombo refractory, isibonelo, Ceramic. Isenzo ezidlulayo zamanje kuholela umphumela kuchazwe umthetho Joule. Lonke Iphuzu liwukuthi isamba ukushisa kuxhomeke ezicini ezifana ukumelana indaba, voltage enisemikhawulweni we Helix, kuyilapho isenzo zamanje.
Nichrome, esibonakala by ukumelana okuqinile, eklanyelwe ukuthuthukisa umphumela. Kancane kancane amalahle Kuvunguza ashisayo, okuholela phezulu emisebeni asebenzayo in the uhla infrared. I luminescence kwenzeka lapho izinga lokushisa okungenani 500 degrees Celsius. Ngokuvamile Kuvunguza ukufuthelana kuze kufinyelele emazingeni aphezulu. Le gesi inert inikeza emisebeni ngaphandle ukulahlekelwa, ngemva kwalokho-ke sifinyelela isibani ingilazi kwesibani heater. Ngenxa yalesi ingxenye isetshenziselwa indaba asebenza ngebhethri isihlabathi, emihle transmissive wavelength yokusebenza ububanzi. Yingakho heater lefoni ukuze indlu elinesimo ukulahlekelwa sakugcina amandla, ngokuvamile zero.
Ngaphezu kwalokho, emisebeni eyingozi kuba sezingeni kulesi sakhiwo. Kuyaphawuleka ukuthi eziningi zalezi izibani heater ziyahlukahluka afanako maqondana axis awo. Lokhu kwenza kube nokwenzeka ukuthola iyunifomu amandla emisebe ye-kuzo zonke izindawo. Ukulungisa lokhu ethile, ngesibani infrared ibekwe njengesigaba esiphambili kulezo ukubonakalisa ekhethekile ngenhloso ngaphandle esibukweni. Ngenxa yalezi zinjongo, ngokuvamile esetshenziselwa insimbi engagqwali. Kungakuhle kube esiliva, okuyinto lisetshenzisiwe kwingemuva ezinhle izinga ingilazi. Kodwa-ke kuyoba inketho ulula kakhulu futhi kuyabiza, yingakho bekuyoba nzima ukukhiqiza kancane heater ngezansi-bomvu ngoba ekhaya.
Kodwa phezu kwalokho konke kuchaziwe, kukhona zone efile, ehlanganisa isibani ngokwalo ngesikhathi kakhulu isikhungo. Kodwa lolu shintsho akusho inciphe zonke izinzuzo etholakalayo ye heater lefoni, kanye nokusebenza ngendlela idivayisi impela high.
Izibani uzosebenza kahle kunjalo, uma kwakunjalo a cleaner, kodwa isixazululo lobuchwepheshe ezifana has ambalwa kahle. Umkhiqizo ziyaqothuka, njengoba sizothinta umfutho womoya. Glass odongeni isidingo ukwenza mkhulu, futhi lokhu ngeke kuphela ukwehlisa ukusebenza zedivayisi, kodwa futhi ukwandisa inani layo. Kuvunguza ngeke shabalala e vacuo. Athomu endaweni enjalo izohamba ikhoyili ashisayo, yingakho uwohloka ngokushesha. izinhlayiya okunjalo ehlangeni kungase axazulule kahle phezu ingilazi, okuyinto futhi kuthinta nekusebenta idivayisi. A igobolondo esobala uyomenzela ebusweni esibukweni, akudingekile kuleli cala. amagesi inert kanye izithasiselo ekhethekile hhayi kuphela ukubambezela yonke inqubo, kodwa futhi basize athomu ukubuyela besezihlalweni zabo.
Yingakho isibani infrared heater ugcwele amagesi ekhethekile inert. Mhlawumbe kancane kunciphisa ukusebenza kahle, Nokho, bohlu ukudluliswa ngenxa Halogen kuyakhethwa ukuze emisebeni ewusizo ibambezeleke ubuncane. Omunye angakhuluma ngisho ungqimba negligibly elincane igesi ngaphakathi isibani njengoba kuqhathaniswa emkhathini.
uzilungiselele Ngakho ilanga samanje ngaphandle amalahle emoyeni ikhiqiza emizimbeni ukushisa elise ngaphansi. Emakamelweni batusa idivaysi efana infrared heater ophahleni. Izimpendulo ngaye bathi indlela yabo yokukhuluma amandla ecucuza is best esichithwa imilenze yomuntu amanga, khona-ke ukushisa izokwabiwa ngokulinganayo, ukudala izimo ukhululekile kakhulu.
Amamodeli holiday uthole yokuzijabulisa
Kukhona hhayi kuphela heater lefoni kagesi, kodwa futhi igesi. Zingaba ukukhanya nobumnyama. Lesi sigaba ku lezi zigaba kuxhomeke ekutheni ilangabi kudivayisi umbukeli noma grille ashisayo Ceramic ebonakalayo. Ungabona idivayisi idivayisi kahle elula esekelwe ukusetshenziswa zokudlela noma cottage. Kusukela igesi kwenzeka ngaphakathi amandla omlilo, kuyacaca ukuthi kumele kube indlela ukunyakaza lomcebo ngaphakathi. Ezansi ethangini gas ifihlekile emehlweni esokhethini ekhethekile usayizi kunalokho okukhulu. ngenhla nje steel engayitholi ipheshana esithandweni othumele ifakwe Amabha ukushisa ukumelana sobumba. Imikhiqizo omlilo baphume ngokusebenzisa eyinqaba kushimula kancane eliphuma ngaphezu ithuluzi.
Izinhlobo igesi heater
Iinsetjenziswa ukuphakama mayelana 1.8 amamitha, futhi ukwakhiwa uqobo itholakala izinhlobo ezimbili: ukhunta futhi umlilo. Uhlobo lokuqala lifana parasol. Ngo ebanzi based ibekwe igesi isilinda yayo, futhi agcinwe tube kuba isihloko sesiqu, igesi okuphakelayo phezulu. Iziko le-ingaphansi isigqoko, lapho kwenzeka inqubo amandla omlilo ilangabi. Ukuma Isigaxa we isambulela awuzange abakhethiwe ngesizathu esithile. Lolu hlobo kugqame ngoba amaza okushisa. Iveza wonke amandla othize embuthanweni, Ukushisa zonke aseduze. Ukuze imibuthano emoyeni opholile ezilungele enjalo heater lefoni. Ukusebenza kwalezi amadivayisi enze kube nokwenzeka ukuba uchithe isikhathi ngaphandle kubanda ngenxa induduzo.
Uhlobo lwesibili - empeleni iziko eye equkethwe esithandweni thwi ngokufanele Ceramic nehele refractory obala ilangabi. Lapho eseneminyaka red-hot, iqala ukunikeza ukukhanya nokushisa in inqwaba. Ukugxila eziko ekusakazeni has portal elinganiselwe. Ukushisisa senzeka kuphela wemboni degree angaba ngu-30. Lolu khetho luhle kakhulu inhlangano ka kusihlwa romantic ndawonye.
Uhlobo lokuqala inikeza imfudumalo nxazonke, kepha enikeziwe ephansi amandla lisuka kuye (isb. E. Akubalulekile ukushiya zishise, isenzo imikhawulo kugqame). Kodwa ilungelo ekupheleni, engenamsebenzi kakhulu ukuhlala.
Negesi heater: ukuthi isebenza kanjani?
Okunjalo kwe-heater lefoni ukuze indlu kungenziwa esakhelwe noma yeselula. Esimweni sokuqala sikhuluma idivayisi ngesimo udonga eziko. igesi yemvelo okuphakelayo kwenziwa nge tube ekhethekile ophuzi ngokufaka ogangeni kusukela ngaphandle. Ngokufanayo ukukhwezwa eyodwa oluzungezile omunye, esetshenziselwa air eyanele futhi qeda imikhiqizo amandla omlilo. Ubukhulu bayo inkudlwana. ukudlula wokufaka kanye okusakazayo okukhiphayo endleleni efanayo, kodwa kakubhalwanga ahlukaniswe udonga steel.
Uma kuwukuthi idivayisi yeselula, it is aboshelwe eziyize steel umzimba, ibhaluni kuthatha the main okuyingxenye ngaphakathi. Ngaphambili okuyingxenye unikezwa nehele, igesi eshubile. Yena likhipha ukukhanyisa ngokusebenzisa portal. esiphumela emoyeni okwenzeka lapha, ngakho zinsizakuphila is hhayi Kunconywa ukusebenzisa endaweni yokuhlala. Ukuze igalaji ilangabi evulekile izingozi eside.
Kanjani izinto ezisebenzisa igesi?
Singacabanga isimiso heater lefoni egijima ku igesi. Uma kuziwa imodi umile, ibekwe phezu kodonga, futhi igesi kanye tube coaxial luqhutshwa odongeni bangaphandle izindlu kudivayisi. Ilangabi ziphuzi futhi ubukeka uyaphila, amboze refractory grate sobumba. Ukuvikelwa Ingosi inikeza ingilazi refractory, ngakho akukho mbuzo i ilangabi evulekile. Ukuqalwa emoyeni Kwenziwa, lapho kwenzeka futhi qeda kwekhabhoni. Amadivayisi anjalo - kukuhle ngempela abahlala heater lefoni, okuvela kulo kungenzeka ukuthola hhayi kuphela ukushisa oyifunayo, kodwa futhi ukunikeza induduzo kanye lula yokuhlala ngenxa yokubakhona wezangaphakathi.
Manje siyazi ukuthi wamukele esitebeleni emisebeni enamandla infrared kungaba kuncike umzimba Ukushisa degrees 500 Celsius. Umuntu kokuba lokushisa 36,6, nayo obusuka wavelength infrared 9 microns. Ukuze uthuthukise lo mphumela okwamanje izakhiwo okuncane udala amadivayisi ifilimu akhethekile asebenza ezingeni lokushisa 45 degrees Celsius. Lokhu ubuchwepheshe wamavukelambuso, kuyilapho sihlinzeka ephelele ukuphepha umlilo. Futhi uthole i-infrared heater ophahleni.
Uphenyo lezi zinsimbi ukukhuluma esivuna kahle yabo kakhulu ngokulondeka okuphelele. "Armstrong" Uhlelo ifana ejwayelekile polyurethane foam tile, ingaphakathi equkethe ucwecwe. It is sidlulile therethrough i kagesi. ukwahlukanisa Special engaphezulu, uqondisa ukushisa kusukela ithuluzi iqonde phansi. Umgomo we operation ye-heater lefoni kuleli cala wukuthi ngemuva kokuqala Ukushisa amathayili impahla uthola isabelo lawo, futhi lapho amandla akanayo indawo lapho engaya, yena selitshona ngqo phansi. Umphumela ilanga lonke endaweni ophahleni. Lolu hlobo idivayisi ngokuphelele hhayi eyingozi.
Izinzuzo heater lefoni
Inzuzo yokuqala futhi ezinkulu amadivayisi sinjalo Ukushisa leso egumbini. heater lefoni, kagesi akwazi ukuxoxa indlu enkulu isikwele imizuzu engu-30 nje. Lena iphuzu elibalulekile, ikakhulukazi ezindaweni sikhula kahle ezindaweni ezibandayo nge. Ngo izakhiwo ezinkulu, kuba okubaluleke ngokukhethekile kuzo. Kungenxa yalesi sizathu, ama-heater lefoni, izimfanelo okuyinto ukhulume ukwaziwa kwawo ezindaweni ezinkulu, ezidume kakhulu imishini ukukhiqizwa ezitolo umsebenzi.
ukuphepha Ingabe Ohulumeni Banalo Lonke okusebenzela thuluzi kungenye ngokunenzuzo. Ngisho noma uwe umlilo uqala. Ngakho-ke, kungaba heater yasekhaya infrared elisetshenziswa izindlu ezakhiwe ngokhuni. Le divayisi akabi mpilo, kungenye inzuzo yayo sobala. Ngisho hhayi okuhlangenwe nakho ukusetshenziswa ke eside, okwakukhona stuffy. heater infrared "Peony" ungadali ngesikhathi umsindo omkhulu ovela ngemuva isici vetroduek.
Uma usebenzisa amadivaysi ezinjalo kungayithuthukisa impilo. Ososayensi baye efakazelwe kuzuze ngokuqhubekayo emisebeni enjalo ngoba abantu. Waves ukuthi ezishisa kakhulu zikhipha izinhlayiyana heater lefoni "Peony" neyaziwayo "imisebe wokuphila" ngoba lolu hlobo emisebeni sivimbela ukukhula zamangqamuzana omdlavuza, normalizes ukukhiqizwa kwe insulin iziguli sikashukela.
Ububi main isebenzisa Amadivayisi ezinjalo ezingapheli zingayilimaza imidwebo ubudala, wawabeka egumbini elilodwa. Ikakhulukazi, it is waphawula ukuthi heater lefoni "Bilyuks" desiccate ngendwangu imidwebo. Nokho, kungaba ukulungiswa: kubalulekile ukuba ayeke eduze humidifier yomculo. Le nhlanganisela kuzovumela kulesetayelekile nomswakama zasendlini.
Abanye bakholelwa ukuthi ngezansi-bomvu yasendlini heater, ukubuyekezwa zazo abantu lingama kuphela omuhle, ibusa amandla amaningi. Lokhu kuyiqiniso kuphela amakamelo esikhulu kakhulu. Kwezinye izimo, ukusetshenziswa kwabo ifaniswe ngamafutha zikagesi. elula kakhulu infrared heater ophahleni, ukubuyekezwa zazo ezifakazela lula yayo, kalula yokusetshenziswa kanye nezinzuzo elivelele abantu.
I-thermostat ene-remote air sensor sensor: i-overview, idatha yezobuchwepheshe
Izimo ukukhula kanye nokuqoqwa ikhalenda amakhowe. Ngasiphi lokushisa sikhule amakhowe ekwindla?
I-Lemon pie ku-multi-brand "i-Redmond" - eyiphundu nephunga elimnandi
Indawo yokudlela "Injabulo." Indawo yokudlela "Injabulo": Tyumen, Petersburg
DLNA: lokho futhi kumele uzisebenzise kanjani